WEYMOUTH PINE (EASTERN WHITE): QEEXIDA NOOCYADA KALA DUWAN, XEERARKA DARYEELKA IYO TARANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Beerto iyo beerista noocyo caan ah oo ah geed-geedeedka Weymouth
Geedka qarxan ee buurta waxaa loo keenay Europe Weymouth. Laakiin ka dibna geedka geedeed ma uusan helin asal ahaan cimilada adag ee koonfurta. Hadda caddaan cad oo baraf ah ayaa laga heli karaa beeraha, gawaarida, xayawaanka iyo xitaa xagaaga xagaaga. Aynu aragno sida loo koro warshad aan muuqanaynin iyo sida loo dacaayado.
Geedkii Weymouth (Pinus strobus) ayaa hoos imanaya sharaxaadda caadiga ah ee dhammaan wakiilada fasalka Conifers. Noocaankan ayaa magaciisa hore u helay magaca dhexe ee qarnigii 18aad, kadibna waxaa la soo saaray badeecooyin kale. Muddo dheer ka hor inta aan la helin magaca, geedka barafka cad ayaa loo isticmaalay dhismaha maraakiibta.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan beerista buuraha, kedar iyo madow.
Nooc kala duwan Goobta Pinus waxay gaadhay ilaa 70 m. Laakiin dhirta caanaha ugu caansan ilaa 35 m, iyadoo da'doodu tahay 90 sano. Maqnaanshaha jirridda - illaa 1.5 m, taajku ma aha mid aad u weyn wuxuuna noqon karaa konik ama kaliya oval, qaab wareegsan.
Xubnaha labada dhinac (cirbadaha) ayaa laga sameeyaa dhoobada, sidaa daraadeed, laamaha ayaa loo qoondeeyey. Waa dhuuban yihiin, mana kobcinayaan waqti gaaban, oo ka duwan jilifka jirridda. Caleemaha caleemaha waa ukun-qaabeeya oo gaadho dherer ah 0.5 cm Cirbadaha cagaar mugdi ah, qiyaas dhexdhexaad ah (illaa 7 cm dherer) iyo dhuuban, wax yar ka dibna dib loo cusbooneysiiyo, cusbooneysiiyaa 2-3 sano oo kasta.
Maleeshiyadu ma soo saaraan miraha waxayna ka yar yihiin dumarka. Dambe, ka dib markii la shaaciyey, bedel qaabka qaabka cylindrical oo lagu riixo midab madow. Xaddiga dheddigga haweenka ayaa dhacaya 2-dii sannadoodba mar. Ka dib markii la abuurayo abuurka, koontooyinka ayaa dhacaya.
Ma taqaanaa? Noocyada kala duwan ee caddaanka ah ee Allmouth "Alba". Waxay ciribta cirbadaha cad-cagaaran.
Noocyada caanka ah iyo sifooyinka beerashada
Weymouth Pine wuxuu ku koraa jawiga qoyan, qabow. Waxay u adkeysan kartaa heerkulka kala duwan - laga bilaabo -29 ° C ilaa +13 ° C. Inta badan, noocyo kala duwan ayaa laga helaa bariga Maraykanka iyo qaar ka mid ah jasiiradaha Faransiiska. Aan eegno noocyo kala duwan iyo noocyo of Pine White iyo tixgeliyaan sawiradooda.
Geedka Weymouth wuxuu si fiican isugu daraa lindens, kalluunka, geedkii, cawska, buckthorn badda, goofy, maples, larch, lowska iyo qoryaha.
Noocyada noocan oo kale ah ayaa leh qaababka beerashada. Tusaale ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la furo caleemaha hoose ee barafka - waxay aad u dhuuban yihiin, marka lagu daro badanaa barafku wuxuu u horseedi karaa kalluunka iyo fungal cudurada.
Pine wemutov "Radiat" waxay ka duwan tahay nooca caadiga ah ee aan ahayn beeritaanka iyo daryeelka, laakiin sidoo kale koritaankiisa, oo gaadhaya 3.5 m oo kaliya. Waxay u koraan, sida noocyada oo dhan, ku noqdaan qaab aan caadi ahayn, waxay si fiican u tabarucaysaa manjooyin guga iyo dayrta.
Wuxuu si dhakhso ah u koraa. Krone 2-2.5 m dhexdhexaad ah Dhirta waxaa inta badan loo isticmaalaa beeritaanka kali ah. Pine waxaa lagu beeray ciidda loamy, doorbidayaa dhinaca mugdiga ah ee sawirka. Dhirta yaryar waxay u egyihiin sida xoortay, laakiin da'da geed ayaa la soo saaraa.
Kala duwanaantani waa cirif iyo wuxuu koraa ilaa 1 m dhererka. Crohn fluffy iyo qaro weyn, cirbado jilicsan oo leh jilciso huruud ah. Waxaa loo dulqaadanayaa garoomada, laakiin qabowga -30 ° C waa in aad ku daboosho geedkii oo la jarijiyo laan ama dhir. Minim waxaa lagu faafiyaa adoo raacaya guga hore ama xilliga dayrta. Beerto waxaa lagu sameeyaa ciidda bacrin ah oo la fangareeyay dhinaca qorraxda ee goobta.
Waa muhiim! Geedka Weymouth laguma dari karo midka xiga ee digaagga ama miro yar, haddii kale cirbadaha ayaa ku dhici doona jeermiska qashinka.
"Minim" dhirta ugu wanaagsan ee ku yaal buuraha alpine iyo ku xiga geedaha dheeraadka ah ee dheeraadka ah. Waxay u muuqataa mid weyn oo leh ubaxyo waaweyn iyo dilaacado.
Weymouth "Pendula" waxay ka duwan tahay noocyada kala duwan ee laanta. Noocan ah geed oo la mid ah qabow ooh. Laamuhu ma koraan ama dhinacooda, laakiin hoos u dhig. Tani waxay abuurtaa aragtida ah "dherer badan". Cirbadaha ilaa 8 sm oo dherer ah, buluug-cagaar. Aan la qabin dhulka iyo beeritaanka.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa hal warshad ku taal goobta. "Pendula" - warshad leh difaac wanaagsan oo dhif ah ayaa saameeya cudurka. Cadaadiska barafku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku korto gobollada waqooyiga. Laakiin ha iloobin in dhammaan noocyada of Pine White ma u dulqaadan cimilada qaaradda.
Weymouth "Minimus" sidoo kale waxay khuseysaa noocyada cayayaanka iyo wuxuu gaadhi karaa wax ka badan 1 m dhererka. Noocani waa mid aan la garan karin oo ka duwan Minima kala duwan, waxaana badanaa laga helaa naqshada muuqaalka. Waxay ku koraan carrada qoyan ee qoyan. Meelaha soo degaya way ka wanaagsan tahay in la doorto qorraxda, "Minimus" - geed geed leh thermofilic. Kala duwanaanshuhu waxay u jawaabaan quudinta badan. Waa wax aan loo baahnayn in la beero geedo midho leh.
Cawska Corku wuxuu ku koraa si tartiib ah wuxuu gaari karaa 1-1.5m dherer ahaan. Mid ka mid ah noocyada yar oo leh foomka saxda ah iyo koraan wax yar. Isku xirka, iyo lambarkooda - illaa 3 xabbadood oo dakhil. Cirbadaha waa mid fudud, midab buluug ah. Crohn wuxuu ku koraa xajmiga.
Kala duwanaanshaha waxaa loo isticmaali karaa sida lakab ama xargaha alpine. Goobidda iyo daryeelku ma aha shaqooyin badan, maadaama geedku uu si fiican u qaboojiyo qaboobaha qaboobaha, ficil ahaan uma baahna hoy iyo waraabiyo. Carrabku waa daruuri ama bac.
"Fastigiata" wuxuu ku koraa dhererka marka loo eego dhexroorka. Waxay gaari kartaa 15m. Laamaha ayaa kor loo qaaday. Fasalku wuxuu si fiican u helayaa carrada. "Fastigiata" kuma qulqulo carrada bacda gebi ahaanba. Ka jawaab celinta waraabinta iyo quudinta.
Taajku maaha mid aad u dheer, oo isugu jira 4 xabbadood oo dakhil. Lives on carrada acidic iyo alkaline. Evergreen waxay si tartiib tartiib ah u koreysaa oo da'da 25 jir waxay noqon kartaa 6 mitir oo keliya. Caleemaha waa ay adag yihiin, cirbadaha waa jilicsan, cagaar mugdi ah.
Waa muhiim! Qoyaan badan iyo guluubka gaasku uma oggolaanayo in geedku uu si caadi ah u koro, sidaas awgeed dhirtu ma degi karto.
Talooyinka iyo Talooyinka
Geedo waaweyn oo aan la qabin karin iyaga oo daryeelaya, si kastaba ha ahaatee, badanaa waxay ku xiran tahay oo kaliya ciidda, laakiin sidoo kale on bacriminta codsatay iyo joogtada ah ee waraabinta. Kuwo badan ayaa aaminsanyihiin in dhirbaaxadu aanay u baahnayn waraabin joogto ah, laakiin ma aha. Weymouth sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan cayayaanka iyo cudurada, sidaa daraadeed waa muhiim in la ogaado xeerarka ilaalinta noocyada iyo raacaan talooyin qaar.
Pines mire waxay ubaahan yahiin waraabin 2-3 asbuuc kasta. Miisaanka biyaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 10 litir geedka. Waxa muhiim ah in aan biyuhu u daadan, sababtoo ah markaa foomka cusbada, oo geedku wuu engegi doonaa.
Xilliga xagaaga waxaad wadi kartaa toddobaad kasta, laakiin qiyaas yar. Waxa kale oo aad ku qoyi kartaa laanta ku jirta qaab yar-yar oo lagu dhaqo biyaha tuubada. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay geedo yar yar.
Dayrta kasta waxay u baahan yihiin inay sameeyaan cayilWaxaa si gaar ah muhiim ah in la sameeyo tan geedaha dhalinyarada. Xakamaynta waxay u oggolaan doontaa ciidda in ay hesho oksijiin badan, tanina waa muhiim in la sameeyo kahor intaadan waraabin.
Mulch waxaa laga sameeyaa cagaar ama cirbado dhacay, dhadday sidoo kale lagu dari karaa. Waxaa lagu dhajiyay lakab 15-20 cm oo ah mulching of geed geed leh, burka dolomite waxaa sidoo kale loo isticmaalaa (macdanta buuran burbursan), kaas oo kaa caawin doona koritaanka ku dhow xaaladaha dabiiciga ah iyo si ka fiican ilaalinta dhirta.
Cawska buuru wuxuu ku niyadjabi karaa koritaankiisa, laakiin xaalada waa la bedeli karaa. Ku filan Isticmaal dawoyinka iyo daawooyinka loo adeegsado sii kordhinta nidaamka xididka. Ka dib oo dhan, dhuumaha uma baahna si aad u badan oo badan oo bacarimiso leh Bacriminta organic. Guga hore, waxaad samayn kartaa qadar yar oo Bacriminta macdanta, kaas oo ka caawin doona dhirta inay ka guurto jiilaalka.
Sababtoo ah muuqaalka qurxoon ee geedku ka soo baxa waxay u baahan tahay oo kaliya qoryaha la isku qurxiyo. Tani waxay si gaar ah u tahay runta cufan, taas oo inta badan ku koraan dhexroorka taajka. Gooyo ayaa ku caawinaysa in geedkii loo siiyo qaabka la doonayo. Waxa kale oo muhiim ah in laga saaro caleemaha gudaha. Xoqitaanka ayaa badanaa lagu sameeyaa Abriil iyo Oktoobar.
Noocyada fir-fircoon ee geed-geedeedka
Sida caleemaha badan, geed cad oo caddaan ah faafin by abuurka iyo grafting. Habka ugu horreeya waa mid cajiib ah duurka, laakiin baaxadiisu way sarreeysaa beerta, sababtoo ah way ka jaban tahay inay beerato beeraha. Si kastaba ha ahaatee, habka labaad (tallaalka) waxaa loo isticmaalaa in lagu koro noocyo qurxiyo iyo qaali ah. Aan eegno dhammaan dhinacyada labada siyaabood.
Ma taqaanaa? Tilmaamaha noocan ah ee geedku waa in dhillaysiga aan lahayn 2 cirbadood, laakiin 5.
Nidaamkani ma aha mid aad uga duwan abuurka miraha geedaha dilka ah. Marka hore miraha waxay u baahan yihiin in la dhajiyo. Si arrintan loo sameeyo, waa in lagu rido meel mugdi ah oo leh heerkul hoose ilaa 3-4 bilood, ka dibna lagu beeray weel gooni ah. Carrada waxaa ku jira alkaline suurad wacan oo lagu daro Bacriminta macdanta.
Beeridda abuurista waxay dhacdaa guga horraanta. Weelka dalagyada leh dalagyada waxay u baahan yihiin in si weyn loo daboolo. Caleemaha ugu horeeya waxaa lagama maarmaan ah inay ku beddesho weelal gooni ah. Sidan oo kale, nooca caadiga ah ee Pinus strobus badanaa waa koray. Marka lagu faafiyo miraha hoosta kale, dabeecadahooda lama xafidayo.
La qabsashadu waxay qaadataa waqti badan, laakiin ma ahan dadaal badan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad tallaasho horaanta guga, maaddaama khabiiro badanaa ku talinayaan, ka dibna bilaab inaad diyaariso jeexitaanka jiilaalka.
Haddii aad go'aansato inaad ku bixiso xagaaga (dhamaadka August), ka dibna waxay ku filan tahay in ay gooynta qaboojiyaha, taas oo ah, si ay u dhisto. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku keydiso weel hawo leh. Gooynka weyn ayaa si fiican u ilaaliya hantidooda. Badanaa gooyn ayaa qalajin kara. Sidaa darteed, ku duub tuwaal qoyan ka hor inta aanad ku kaydin.. Ku kaydi heerkul ah 0 ° C.
Ma taqaanaa? Nidaamka asaasiga ah ee geed cagaarka ah ayaa 20 jeer ka weyn tan qoryaha.
Weymutov geed waa in la isku tolaa dhirta shan-geesoodka ah - wax geedo kedar ah ama noocyo kale oo geed ah oo cad.
Mindida. Waa lagama maarmaan. Badanaa isticmaal sakiin. Haddii aad tallaallid markii ugu horeysay, ka dibna qaado mindiyo fiiqan oo dooro mid ka mid ah.
Mindida dheeriga ah. Waxaa loo isticmaalaa cirbadeynta. Sidaa daraadeed, mindida xididada uma baahna in la nadiifiyo rinjiga iyo mar kale.
Talaalada badanaa waxay isticmaalaan baakidh gaar ah.
Qalabka dabaysha. Waxaa jira cajalado gaar ah, laakiin waxaad ka dhigi kartaa naftaada alaabta qashinka ah. Waxa ugu muhiimsan ee maaddadu ay ahayd mid xoog leh oo daboolaysa.
Khamriga iyo mashiinka ayaa loo baahan yahay si loo tirtiro mindi ka soo rarta.
Qalabka gargaarka degdegga ah waa inuu had iyo jeer la socdaa haddii ay dhacdo in la gooyo.
Tallaalka si dhakhso ah ayaa loo sameeyaa. Xuubka ayaa laga nadiifiyaa cirbadaha, ka dibna gooynta naftooda ayaa loo nadiifiyaa si la mid ah. Maskaxda ku hay in aad u baahan tahay inaad ka baxdo cirbadaha inta badan ee scion, halka isla markaa waxaad ka bixi kartaa oo kaliya caarada on gooyn. Iska yaree jilibka si asli ah ee grifinta, isla markiiba gooyaa on gooyn. Sida ugu fiican, waa inaad sameysaa 10-13 daqiiqo. - dhaqso, waa ka sii fiican. Waqtigaan, dabagalka qaybaha la isku xidhan yahay ee galka iyo jarista ayaa sidoo kale lagu daray. Ha ilaawin in geeddi-socodku uu ku lug leeyahay isticmaalka mindiyaha fiiqan, oo si sahlan loo dhaawaco. Sidaa daraadeed, way ka fiican tahay tallaalka oo ay la socoto caawinaad saddexaad.
Tallaallada waxaa lagu kaydiyaa koriyo ama meelo mugdi ah, oo ka fog qorraxda. Qoyaanku waa in la dhigaa mid sare (waxaad ku dabooli kartaa awoodda qaar). Heerkulku waa inuu ahaadaa + 20-22 ° C. Dabaysha ayaa laga saari karaa koritaanka firfircoon iyo soo bixitaanka cirbadaha cusub.
Weymouth Pine waa xal fiican oo aad ku nadiifin kartid. Evergreen waxay leedahay difaac sare waxana ay muujinaysaa iska caabin miro fiican oo cimiladeena ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la abuuro xaaladaha lagama maarmaanka u ah horumarka: wakhtiga biyaha, guntinta iyo dharka sare. Ka dibna qalookaan qurux badan ayaa kugu farxi doona tobanaan sanado badan.